युनाइटेड इदी-मर्दीको आइपीओ बाँडफाँड, कस-कसलाई पर्यो ? Bizshala -
काठमाण्डौ । युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ ।
केहीबेरअघि निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलमा एक कार्यक्रमका बीच आइपीओ बाँडफाँड भएको हो।
पूरा रिजल्ट केहीबेरपछि बिजशालामा प्रकाशित हुनेछ ।
United IDI-Mardi and R.B. Hydropower Limited IPO